Detoronomy 17 - Ny Baiboly
Detoronomy toko 17
Ny atao sorona tsy tokony hisy kilema - Sazin'ny fanompoan-tsampy - Ny raharaha sarotra hoentina amin'ny fitsarana ambony - Ny mpanjaka.
1Aza hatao sorona amin'ny Tompo Andriamanitrao ny omby na zanak'ondry manan-kilema na misy takaitra, satria fahavetavetana eo imason'ny Tompo Andriamanitrao izany.
2Raha eo afovoanao, amin'ny iray amin'ny tanànanao izay omen'ny Tompo Andriamanitrao anao, no misy lehilahy na vehivavy manao izay ratsy eo imason'ny Tompo Andriamanitrao amin'ny fivadihana ny fanekeny, 3ka lasa mankamin'andriamani-kafa, hanompo azy sy hiankohoka eo anatrehany, dia eo anatrehan'ny masoandro na ny volana na ny zava-drehetra milahatra eny an-danitra, izay tsy nasaiko hatao; 4rahefa misy milaza izany aminao ka efa renao izany, dia fotory tsara, ka raha marina izany ary voaporofo tokoa izany, ka tanteraka tokoa teo amin'Israely izany fahavetavetana izany, 5dia avoahy eo am-bavahady izay lehilahy na vehivavy meloka nanao izany zava-dratsy izany, ka torahy vato ho faty na lehilahy na vehivavy. 6Amin'ny tenin'ny vavolombelona roa na telo no hamonoana ho faty izay tokony ho faty, fa ny tenin'ny vavolombelona iray monja tsy hamonoana azy. 7Ny tànan'ny vavolombelona no hiainga voalohany hamono azy, vao ny tànan'ny vahoaka rehetra. Izany no hamongoranao ny ratsy eo aminao.
8Raha misy ady momba ny vonoan'olona, na fifanolanana, na fandratràna olona, zavatra ifandirana ao anaty vavahadinao, ka ataonao sarotra loatra, dia hitsangana hianao ary hiakatra any amin'ny fitoerana izay hofidin'ny Tompo Andriamanitrao; 9dia handeha hanatona ny mpisorona, taranak'i Levì, sy ny mpitsara izay tompon-draharaha amin'izany andro izany. Hila hevitra aminy hianao ka hambarany aminao izay araka ny lalàna. 10Dia ataovy araka izay didim-pitsarana hatorony anao, any amin'ny fitoerana nofidin'ny Tompo, ary tandremo mba hifanaraka tsara amin'izay hampianariny no hataonao. 11Araka ny lalàna hampianariny anao sy araka ny didim-pitsarana holazainy aminao no ataovy, fa aza mivily amin'izay hambarany anao, na ho amin'ny ankavanana na ho amin'ny ankavia. 12Hohelohin-ko faty izay mety hoentim-piavonavonana, ka amin'ny ataony dia tsy hihaino ny mpisorona mitoetra eo hanompoany an'ny Tompo Andriamanitrao, na tsy mihaino ny mpitsara. Izany no hamongoranao ny ratsy eo amin'Israely. 13Fa hatahotra ny vahoaka rehetra rehefa mandre izany, ka tsy hety ho entim-piavonavonana intsony.
14Raha avy izay hahatafidiranao any amin'ny tany omen'ny Tompo Andriamanitrao anao, ary efa azonao ho fanananao izy sy efa niorim-ponenana any hianao, ka manao hoe: Mba te-hanam-panjaka hifehy ahy toy ny firenena rehetra manodidina ahy, aho; 15dia izay hofidin'ny Tompo Andriamanitrao ihany no hatsanganao ho mpanjaka hifehy anao; eo afovoan'ny rahalahinao ihany no hangalanao mpanjaka izay hatsanganao hifehy anao, fa ny olon-kafa firenena, izay tsy rahalahinao, dia tsy ho azonao halaina ho mpanjakanao. 16Aoka anefa izy tsy hanan-tsoavaly betsaka na hitondra ny vahoaka hiverina any Ejipta mba hahazoany soavaly betsaka, fa hoy Iaveh taminareo: Aza miverina amin'izany làlana izany intsony amin'ny sisa. 17Aoka tsy hampirafy maro izy, fandrao mivily ny fony, ary aoka tsy hamory volafotsy sy volamena be miavosa izy. 18Raha vao tafapetraka amin'ny sezam-panjakany izy, dia aoka hosoratany amin'ny boky anankiray ho azy ny dikan'izao lalàna izao, ka hataony mifanaraka amin'ilay ao amin'ny Levita mpisorona. 19Ho eny aminy sy hovakiny amin'ny andro rehetra iainany izany, mba hianarany hatahotra an'ny Tompo Andriamininy sy hitandrina ny teny rehetra amin'izao lalàna izao sy izao fitsìpika rehetra izao, amin'ny fanarahana azy, 20mba tsy hisandratan'ny fony ambonin'ny rahalahiny, ary tsy hiviliany ny didy na ho amin'ny ankavanana na ho amin'ny ankavia, ka ho lava andro ao amin'ny fanjakany izy sy ny taranany eo afovoan'Israely. >
Powered by CI-CMS Version 2.0.0.0 | Page rendered in 0.2449 seconds